उत्पादन लागत - औद्योगिक उद्यम को गतिविधि को एक महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक। उत्पादन लागत पनि व्यक्त उद्यमी को खर्च उत्पादन र यी उत्पादनहरु को बिक्री गर्न प्रत्यक्ष सम्बन्धित। अर्को शब्दमा, लागत यो कम्पनी निर्मित उत्पादनहरु के लागत प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो आंकडा श्रम लागत (ज्याला) र पछिल्लो श्रम (कच्चा सामाग्री, इन्धन, सामाग्री र अन्य स्रोतहरूको लागत, निश्चित सम्पत्ति को मूल्यह्रास) को लागत समावेश छ।
व्यवस्थित लागत कमी उत्पादन र कामदारहरूलाई हितमा सुधार गर्न थप विकासका लागि कोष अप मुक्त। त्यो लाभ वृद्धि को एक महत्वपूर्ण स्रोत हो।
अधिक यो उद्यम मा राम्रो संगठित रेकर्ड हुनेछ किनभने लागत को सही गणना, महत्त्वपूर्ण छ, गणना को थप सिद्ध भएको तरिकाहरू प्रयोग, को सजिलो विश्लेषण मार्फत उत्पादन लागत कम गर्न तरिकामा मूल्याङ्कन हुनेछ।
उत्पादन लागत कसरी कम गर्ने?
एउटा महत्त्वपूर्ण अवस्था लगातार प्राविधिक प्रगति को लागत कम छ। को एकीकृत स्वचालन विनिर्माण प्रक्रिया, आधुनिक प्रविधिको परिचय, उन्नत सामाग्री को परिचय, प्रयोग प्रविधिहरू को सुधार लागत कम गर्न प्रभावकारी तरिका हो।
लागत कम गर्न अर्को महत्वपूर्ण आरक्षित सहयोग र विशेषज्ञता विस्तार गर्न छ। आम-धारा उत्पादन एकाइ लागत एक विशेष कम्पनी नै उत्पादन उत्पादन कि उद्यमको लागत तुलनामा एकदम कम हुन, तर सानो परिमाणमा हुनेछ। विशेषज्ञता विकास सहकारी सम्बन्ध अझ तर्कसंगत संगठन आवश्यक हुनेछ।
पनि लागत कमी बाटो वृद्धि समावेश उत्पादकत्व। अनुपात ज्याला लागत संरचना मा घट्छ प्रदर्शन वृद्धि गरी।
संघर्ष ठूलो महत्व कम गर्न अनुपालन को लागत उत्पादन को सबै चरणमा मा एक अर्थव्यवस्था को छ। यो लागत कम , भौतिक साधनहरूको मर्मत लागत र उत्पादन को व्यवस्थापन कम, विवाह र अन्य गैर-उत्पादक खर्च देखि घाटा हटाउनु। जानिन्छ, भौतिक लागत मा एक महत्वपूर्ण साझेदारी छ , लागत संरचना उत्पादन प्रक्रियामा कच्चा माल को लागत मा पनि एक मामूली कमी कम्पनी एक महत्वपूर्ण समग्र प्रभाव दिन्छ भनेर। यहाँ यो सामाग्री आपूर्तिकर्ता को चयन सुरु गर्न आवश्यक छ। सामाग्री परिवहन को सस्ता मोड वितरित गरिनेछ भने, यो पनि उद्यम गर्न लागत कम गर्छ। यो सस्ता माल प्राथमिकता दिन आवश्यक छ, तर अन्तिम उत्पादन गुणस्तर को हानि गर्न।
तपाईं पनि उत्पादन डिजाइन र उत्पादन प्रविधि, धन स्तर आधारित खपत को परिचय सुधार को संभावना ध्यान गर्नुपर्छ।
लागत मूल्य कम यी तरिका मात्र व्यक्तिहरूलाई छैनन्। तपाईं पनि नियन्त्रण मर्मतका लागत कम एकाइ को व्यवस्थापन सरल बनाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। सहायक र ancillary काम को mechanization लागि प्रभावकारी उपाय पूरा तदनुसार, सामान्य खर्च गर्दछ, कर्मचारीहरु को संख्या कम गर्न र हुनेछ। लागत कमी को महत्वपूर्ण रिजर्व विवाह देखि घाटा कम मा निष्कर्षमा। को culprits प्रकट विवाहको कारण, को अध्ययन बाहिर विवाह, कमी र सबैभन्दा कुशल प्रयोगबाट घाटा हटाउन उपाय बोक्न अनुमति दिन्छ बर्बाद उत्पादनहरु। सामान्य मा, लागत कम गर्ने उपायहरू प्रयोग को हदसम्म सुविधाहरू र प्रत्येक व्यक्ति उद्यम को क्षमताहरु मा निर्भर गर्दछ।
श्रम बजार कामकाज को संयन्त्र
EBITDA - यो के हो? को विश्लेषणात्मक प्यारामिटर कसरी गणना गर्ने?
लाभ र कम्पनी को बेफाइदा
"Fritters तिखो": phraseologism मान, मूल कथा
सना "पनडुब्बी": ठेगाना, विवरण, सेवा
उद्यम देखि बर्बाद कागज र गत्ता को स्वीकृति र मास्को क्षेत्र
टकसाल उपयोगी गुण र विनाशकारी
रगत गणना सम्पन्न भयो। रगतको एक सामान्य विश्लेषण संग बच्चाहरु र वयस्क मा रगत जहाँ
अनाज को मुख्य प्रकार: तस्बिर सूची